Patients who have diabetes should get tooth extraction or not – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Patients who have diabetes should get tooth extraction or not
ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှိသူမြား သှားနှုတျသငျ့ မနှုတျသငျ့
ဒီနိုငျငံမှာ ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါဟာ အဖွဈအမြားဆုံးရောဂါတဈခုဖွဈသလို ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှငျအမြားစုကွောကျတတျတာဟာလညျး သှားနှုတျရမှာကိုပါပဲ။ အကွောငျးက ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှိနရေငျ အနာမကကျြတတျဘူး သိထားကွတာ တဈကွောငျး၊ အရပျထဲမှာ ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှိရငျ သှားမနှုတျရဘူး အခငျြးခငျြးပွောဆို သတငျးပေးနကွေတာတဈကွောငျး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ သှားနှုတျရမှာ ကွောကျတတျကွပါတယျ။
ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှငျတှဟော တကယျပဲ သှားနှုတျလို့မရဘူးလား…?
လို့မေးရငျ သှားနှုတျလို့ရပါတယျ။ ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါကို ထိနျးထားနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျဟာ ဘာမှစိုးရိမျစရာ မရှိဘဲ ပြျောပြျောကွီးကို သှားနှုတျလို့ရပါတယျ။ နှုတျသငျ့တယျဆိုရငျပေါ့။ ဒီနိုငျငံမှာ အမြားစုက ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါကိုယျ့ကိုယျကိုရှိမှနျးမသိဘဲ ပုံမှနျမစဈဆေးကွညျ့ဘဲ သှားဆရာဝနျကို ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါမရှိပါဘူး ပွောပွီးသှားနှုတျခံတဲ့သူတှလေညျး ထုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဆီးခြိုသှေးခြိုကွောငျ့ သှားနှုတျထားတဲ့နရောဟာ အနာမကကျြဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တဈခြို့က သှားအခွအေနအေရမျးဆိုးလို့ နှုတျပဈရမယျမှနျးသိပွီး ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှိတဲ့အတှကျ သှားဆေးခနျးမလာရဲဘဲ ပယြောလကနျနတေဲ့သူတှလေညျး ရှိတတျကွပါတယျ။
လူတှရေဲ့ခံတှငျးဟာ သှေးကွောတှအေရမျးမြားပွားတဲ့နရောတဈခုဖွဈတာမို့ ထိခိုကျဒဏျရာတဈခုခုရရငျ အနာကကျြမွနျပါတယျ။ သှားနှုတျထားတဲ့လူနာဟာလညျး ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါရှငျဖွဈစဦေးတော့ အနာမကကျြဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဆီးခြိုသှေးခြိုရှိလို့ သှားမနှုတျရဲဘူး စိတျမခဘြူးဆိုရငျလညျး သှားဘကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျဟာ လူနာရဲ့ဆီးခြိုရောဂါအတှကျ ပုံမှနျပွသနတေဲ့ဆရာဝနျဆီကို သှားနှုတျသငျ့ မနှုတျသငျ့ သခြောအကွောငျးကွားပွီး ဆရာဝနျရဲ့သဘောတူညီခကျြရမှ နှုတျပေးပါတယျ။
အခွအေနဆေိုးဝါးနလေို့နှုတျသငျ့နတေဲ့သှားဟာ မနှုတျရငျသာ သူ့အမွဈထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ပွညျတှေ ပိုးတှကေ ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါနဲ့ပေါငျးပွီး ပိုဆိုးတတျတာမို့ ဆီးခြိုသှေးခြိုရှိရငျ သှားနှုတျလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အသိအမှားကွီးကို အခြိနျမှီခေါငျးထဲက ထုတျပွီး သငျ့တျောတဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှကေို ဆရာဝနျတှနေဲ့တိုငျပငျပွီး ခံယူကွပါလို့ တိုကျတှနျးပါရစေ…။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူများ သွားနှုတ်သင့် မနှုတ်သင့်
ဒီနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်သလို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်အများစုကြောက်တတ်တာဟာလည်း သွားနှုတ်ရမှာကိုပါပဲ။ အကြောင်းက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိနေရင် အနာမကျက်တတ်ဘူး သိထားကြတာ တစ်ကြောင်း၊ အရပ်ထဲမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိရင် သွားမနှုတ်ရဘူး အချင်းချင်းပြောဆို သတင်းပေးနေကြတာတစ်ကြောင်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွားနှုတ်ရမှာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေဟာ တကယ်ပဲ သွားနှုတ်လို့မရဘူးလား…?
လို့မေးရင် သွားနှုတ်လို့ရပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘဲ ပျော်ပျော်ကြီးကို သွားနှုတ်လို့ရပါတယ်။ နှုတ်သင့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ အများစုက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိမှန်းမသိဘဲ ပုံမှန်မစစ်ဆေးကြည့်ဘဲ သွားဆရာဝန်ကို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမရှိပါဘူး ပြောပြီးသွားနှုတ်ခံတဲ့သူတွေလည်း ထုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဆီးချိုသွေးချိုကြောင့် သွားနှုတ်ထားတဲ့နေရာဟာ အနာမကျက်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်ချို့က သွားအခြေအနေအရမ်းဆိုးလို့ နှုတ်ပစ်ရမယ်မှန်းသိပြီး ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိတဲ့အတွက် သွားဆေးခန်းမလာရဲဘဲ ပေယျာလကန်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။
လူတွေရဲ့ခံတွင်းဟာ သွေးကြောတွေအရမ်းများပြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရရင် အနာကျက်မြန်ပါတယ်။ သွားနှုတ်ထားတဲ့လူနာဟာလည်း ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်ဖြစ်စေဦးတော့ အနာမကျက်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဆီးချိုသွေးချိုရှိလို့ သွားမနှုတ်ရဲဘူး စိတ်မချဘူးဆိုရင်လည်း သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဟာ လူနာရဲ့ဆီးချိုရောဂါအတွက် ပုံမှန်ပြသနေတဲ့ဆရာဝန်ဆီကို သွားနှုတ်သင့် မနှုတ်သင့် သေချာအကြောင်းကြားပြီး ဆရာဝန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရမှ နှုတ်ပေးပါတယ်။
အခြေအနေဆိုးဝါးနေလို့နှုတ်သင့်နေတဲ့သွားဟာ မနှုတ်ရင်သာ သူ့အမြစ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်တွေ ပိုးတွေက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ပေါင်းပြီး ပိုဆိုးတတ်တာမို့ ဆီးချိုသွေးချိုရှိရင် သွားနှုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ အသိအမှားကြီးကို အချိန်မှီခေါင်းထဲက ထုတ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ခံယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…။
Estrogen/Progestin Hormonal Injection